ကွတ်ခိုင်မှာ တရုတ်ကပြန်လာသူတွေ ၁၄ ရက်ခွဲထား
23 มี.ค. 2563 - 00:57 น.
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်ထဲမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေသခံ တချို့ကို အသိပညာပေးတာတွေနဲ့ တရုတ်ပြည်က ပြန်လာသူတွေကို ၁၄ ရက် ခွဲခြားစောင့်ကြည့်တာတွေ လုပ်နေပါတယ် ။
ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်ထဲက မန်တပ်ကျေးရွာအုပ်စုမှာ ဒေသခံ ၇ ယောက် သေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ လက်ရှိ အများစိုးရိမ်နေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ တီဘီနဲ့ နာတာရှည် ရောဂါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နဲ့ သွားရောက်စစ်ဆေးနေတဲ့ မုံစီးကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဒေါ်ထုဆန်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ကွတ်ခိုင်မှာ လက်နက်ကြီး ကျလို့ လသားကလေးနဲ့မိခင်အပါအဝင် ၅ ဦးသေဆုံး
တရုတ်နိုင်ငံ ရောက်မြန်မာလုပ်သားတွေ မနေရဲတော့ လို့နေရပ်ပြန်လာကြ
တရုတ်နိုင်ငံထဲ တရားမဝင်နေထိုင်တဲ့ မြန်မာ ၁၅၀ ကို ပြန်ပို့
မန်တပ်ကျေးရွာအုပ်စုထဲက မန်တပ် ၊တွန်းမုံ၊ ပါချန်းရွာက ဒေသခံ ၇ ယောက် သေဆုံးတာရှိတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်က ဆရာဝန်တွေအပါအဝင် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က သွားရောက်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ တီဘီရောဂါနဲ့ လေဖြတ်၊ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော ရောဂါတို့ကြောင့် သေဆုံးတာဖြစ်တယ်လို့ စစ်ဆေးတွေ့ရှိကြောင်း ဒေါ်ထုဆန်က ဆိုပါတယ်။
အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ တရုတ်ကို အလုပ်သွားလုပ်သူတွေထဲက ပြန်လာတဲ့ မန်တပ်ကျေးရွာက လူနှစ်ယောက်ကို သီးသန့်ခွဲခြားပြီး ကျန်းမာရေးက ဆရာဝန် ဆရာမတွေနဲ့ စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ ဒေါ်ထုဆန်က ပြောပါတယ်။
သေဆုံးသွားသူ ၇ ယောက်ထဲမှာ အသက်ကြီးပိုင်းက အများစုဖြစ်ပြီး အငယ်ဆုံးကတော့ အသက် ၁၂ နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလက်ရှိ အခြေအနေမှာ တရုတ်မှာ အလုပ်လုပ်နေရင်း ပြန်လာမယ့်လူတွေကို ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေဆီကတဆင့် သတင်းပို့ခိုင်းပြီး ကျေးရွာအလိုက် ကိုဗစ် ၁၉ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကွတ်ခိုင်မှာ တရုတ်ကပြန်လာသူတွေ ၁၄ ရက်ခွဲထား